Dhismaha 'Sekapark-Otogar Tramway Tramway' waa inuu bilowdaa inta iskuulku fasaxa ku jiro | RayHaber | raillynews
HometareenkaDhismaha Tramway ee Sekapark-Otogar waa in laga bilaabo dugsiyada
29 / 06 / 2015 tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, TURKEY, taraamka
Dhismaha Sekapark-Otogar Tramway waa inuu bilaabmaa marka iskuuladu fasaxa yihiin: 7 seddex todobaad kadib doorashadii bisha Juun iyo labo isbuuc ka dib fasaxa xagaaga ee iskuulka Ma jiro qof dhihi kara magaaladan ayaa ka adkaatay dhibaatooyinkeeda oo dhanna wax dhibaato ah ama baahi maal gashi ma leh. Shaqooyin badan ayaa u baahan in laga qabto magaaladan. Intaas waxaa sii dheer, haddii shaqo laga doonayo magaaladan, waa inay bilaabataa inta u dhexeysa maalinta iskuulada ay xiran yihiin xagaaga iyo maalinta iskuulada dib loo furi doono xilliga dayrta.
Waan ogahay inaan wax badan ka qoro tan. Laakiin ma sheegi karo. Kocaeli mar labaad ayuu luminayaa .. Waxaa jira arrimo badan oo ku saabsan magaalada oo ku saabsan ajandaha. Waxaa jira mawduuca mashruuca Tram ee u dhexeeya Sekapark-Otogar safka hore. Maaha hawl fudud. Izmit, jidadka halka taraafikada ay ugu daran yihiin oo aan lahayn siyaabo kale, waxay sii xirnaan doonaan muddo dheer. Meelkasta waxay ku nagaan doonaan ciidda ciidda.
Mashruuc sidan oo kale ah, qodista waxaa lagu dili lahaa 14 Juun Isniinta, halkaas oo ay jireen koox dawlada hoose ah oo si fiican ulasocto shaqada, sameysay jadwalka maalgashiga si sax ah oo si masuuliyadi ku dheehantahay u wajahay magaalada iyo dadkeeda. Iskuuladu waxay ku jiraan ciidaha rubucna waa iskuul; ugu yaraan duminta dhismayaasha la wareejiyay ayaa la sameyn doonaa, laga bilaabo jidadka ay taraafikada magaaladu ugu daran tahay, barnaamij ayaa la samayn doonaa kaasoo Izmit ka dhigaya mid aan fiicnayn dayrta.
Waxaan weydiisanaynaa masuuliyiinta; Ne maxaa ku dhacay taraamka? Aynı Jawaab isku mid ah maalmaha, ık Waxaan sameynay jilbaha. Shaqada waxaa lasiiyay horjooge labaad oo ugu hooseeya. Shirkadda ugu iibka yar ayaa ka soo horjeedsatay qandaraaska. Waa geedi socod. Waxaan sugeynaa natiijada diidmada. ”
Marka cidina ma oga wax ku saabsan mashruuca taraamka ilaa maanta. Waad ogtahay, laga yaabee in la tirtiro hindisada, waxaa jira xaalad sida dib-u-jilicsan.
Waa koox shaqadeeda si wanaagsan u qabatay oo ka fikirtay dhammaantood. Maxuu 30 loogu qabanayaa qandaraaska tareenka, 2014 Maarso 2015 illaa May 14? Dhammaan howlahaas xafiisyada dawladda ayaa la dhammeeyey, oo haddii taraamka loo dhigo Izmit, 14 waxaa lagu dhufan lahaa qoditaanka magaalada markii iskuulada la xirayo bisha Juun. Lacagta mashruuca taraamka waa diyaar. Dhibaato malahan. Laakiin sikastaba dhismaha lama bilaabi karo.
Waxaa jira tusaalooyin badan oo badan .. Dawlada Hoose ee Izmit, xaafada Karabas, gadaasheeda Dugsiga Hoose Ulugazi si dib loogu cusbooneysiisto Ikizliçeşme Street. Hagaag, wuu sameyn doonaa .. Laakiin goormuu sameyn doonaa? .. Waxaan xasuusanahay dhismaha mashruuca qabanqaabada ee agagaarka Belsa Plaza ee aagga Acısu Park ee degmada İzmit. Dhammaantood waxay qaateen waqti ka badan sidii loo qorsheeyay, dhammaantoodna waxay dhibaatooyin daran u abuureen magaalada. Shaqada İkizliçeşme Street ma ahan wax ka yar baraf shaqada. Hindisada ayaa la sameeyay. Ma cadda goorta uu dhismaha bilaabmayo. 14 U oggolow iskuulada inay furaan bisha Sebtembar, waddo kasta oo cunugga u aado Ulugazi ayaa ka gudbi doona goobta dhismaha. Gawaarida adeega ayaan heli doonin meel ay dhigtaan. Waxaa jiri doona jahwareer badan bilo.
Dhinacan magaalada dhanna dan kama gelin. Haatan waa magaaladan faaruqa ah .. Hadda waa mid deggan. Hadda waa waqtigii ganacsiga magaaladan laga sameyn lahaa. Magaaladeenna waxaa maamula dad la rajeynayo inay ka soo qeybgalaan casuumaadda afurka fiidkii. Xaqiiqdii, waa waqtigii ganacsiga laga sameyn lahaa magaaladan oo la is taagi lahaa. Laakiin fiiri, waxba lagama qaban agagaarkaaga.
Isha: www.ozgurkocaeli.com.t waa
Kocaeli Sekapark Baska Saldhigga Mashiinka Xirmooyinka Tamarta 12 Iibsashada Gawaarida Gawaarida…
Sekapark - Otogar Tram Line Project ayaa la siiyay qandaraaska oo lagu iibsaday 12 baabuur oo kuwa xamuulka ah…
Ogeysiiska Qandaraaska: Diyaarinta Mashruucyada Hore iyo Codsiga ee Khadka Tareenka ee Sekapark-Otogar
Sekapark - Bus Station Tram Line Mashruuca diyaargarowga hordhaca ah iyo…
Sekapark-Otogar Inta udhaxeysa Mashruuca Tram Line Mashruuca horudhaca iyo dalabyada…
Sekapark - Otogar Tram Line Mashruuca Horudhaca iyo barnaamijyada dalabka
Xaraashka xaraashka xaraashka Sekapark-Otogar ee 12 Febraayo (Video)
Pre-qualifying Qualification Line ee Sekapark-Otogar Tram Line
Sekapark-Otogar Tram Line ayaa gudbiyay Golaha oo si xushmad leh
Sekapark - Otogar Tram Line Dhismaha iyo shaqooyinka pre-doorashada electromechanical…
Izmit Sekapark - Wadatashiga Mashruuca Baska Tram Line, kormeer iyo…
Xaraashka xaraashka safarka ee Sekapark Otogar ayaa dib loo dhigay 13 Nisana
Sekapark - Mashruuca Otogar Tramway
Mashruuca Transit Gulf İzmir
Marmaray Cilesi (Sawir Sawir) Bakirköylüler